दाङमा शान्तिपूर्ण मतदान - Pradesh Today
Homeफिचरदाङमा शान्तिपूर्ण मतदान
दाङमा शान्तिपूर्ण मतदान
६७ प्रतिशत मत खस्यो …
दाङ, १४ मंसिर । दाङमा शनिबार भएको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको छ । उत्साहपूर्ण तरिकाको मतदान पनि भएको छ । बिहान ७ बजेदेखि सुरू भएको मतदान बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं ३
(ख) मा प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो । दुबै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदात सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
कुल मतदाता संख्या ७३ हजार १ सय ७२ रहेकामध्ये ४८ हजार ९ सय ४४ मत खसेको छ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले ६६.८९ प्रतिशत मत खसेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा ३ (ख) मा जम्मा मतदाता संख्या ६८ हजार ७ सय १९ रहेकोमा मतदान जम्मा ४५ हजार ७ सय १८ मात्रै खसेको छ । त्यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को निर्वाचन कुल मतदाता संख्या ४ हजार ४ सय ५३ रहेकोमा ३ हजार २ सय २६ मत खसेको छ ।
दाङसहित ३७ जिल्लाका रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि शनिबार मतदान भएको थियो ।निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले मतदान पनि अपेक्षाकृत रूपकै भएको बताए । दुई स्थानका ३४ मतदानस्थलमा मतदान भएको हो ।
अति संवेदनशील भनिएका क्षेत्रमा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान पूरा भएको छ । ३ (ख) मा ३२ मतदानस्थल र ७७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा दुईवटा मतदानस्थल र पाँचवटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो ।
किरियापुत्रिले मतदान गरे
दाङ निर्वाचन क्षेत्र ३ (ख) मा चारजना किरियापुत्रीले पनि मतदान गरेका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ जनकल्याण मावि सिमसुन्दरपुरबाट उनीहरूले मतदान गरेको सहायक मतदान अधिकृत मदन बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार किरियापुत्री दुई दाजुभाइ अमर विष्ट र खिम बहादुर विष्ट, श्रीमान श्रीमती दुर्गा बहादुर खड्का र केशरी खड्काले मतदान गरेका हुन ।
९७ बर्षेले गरे मतदान
उपनिर्वाचनमा दाङ ३ (ख) मा एक ९७ बर्षे वृद्धले मतदान गरेका छन् । बुइ चढेर मतदान केन्द्रका पुगेका बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ चरकमटिया निवासी ९७ वर्षकी सेती बोटेले मतदान गरेकी हुन । १९७९ चैत २७ गते जन्मिएकी बोटेले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको बताइन् ।
वडाको मतगणना सुरू
घोराही वडा नम्बर १६ को मतगणना शनिबारनै सुरू भएको छ । आज बिहानसम्ममा नजितासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पदको मतगणना भने आइतबार बिहानदेखि मात्रै हुने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रबाट मतपेटिका ल्याउन समय लाग्ने र राति अबेर हुने भएको हुँदा आइतबार बिहानमात्रै मतगणना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
तर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेससभा (ख) को मतगणना भने भोलि बिहानबाट मात्रै हुने भएको छ । प्रदेससभा सदस्यको मतदानका मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा दुई समूहमा हुने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।
थवाङमा नेकपाका बुढामगर विजयी
रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ को वडा अध्यक्ष चयनका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाका जनकबहादुर बुढामगर विजयी भएका छन् । उनले १७४ मत ल्याएर विजयी भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर बुढाले २६ मत मात्रै प्राप्त गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ । खसेको मतमध्ये ९ मत बदर भएको कार्यालले जानकारी दिएको छ । एक हजार २ सय ७४ मतदातामध्ये २ सय ९ जनाले मात्रै भोट हालेका थिए ।
बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म भएको मतदानमा एक सय १० पुरुष र ९५ जना महिलाले मात्रै मतदान गर्न आएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष पदका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका जनकबहादुर बुढामगर र नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर रोकामगरबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो । थवाङ–१ का अध्यक्ष फर्कबहादुर बुढामगरको गत असार ६ मा बिरामीका कारण मृत्यु भएको थियो ।
उक्त वडामा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेतृत्व विजयी भएका थिए । यद्यपि, उनीहरु सबैले आफूहरु पार्टीको तर्फबाट नभई ‘स्वतन्त्र’ रुपमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
हाल उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका स्थानीय भद्रकुमार झाँक्रीले अध्यक्ष पदमा निर्वाचन लड्न सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए । निकै थोरै मतदाताले मात्रै भोट हालेका कारण मत परिमाण छिट्टै आएको हो ।
सुत्केरीले गरिन मतदान
प्यूठान, १४ मंसिर । प्यूठानमा आठ दिनकी सुत्केरीले मतदान गरेकी छन् । ऐरावती गाउँपालिका वडा नम्बर २ मोती मावी बरौला (ख) मतदान केन्द्रबाट बरौला सालघारीकी मिना विकले दिदीको सहायतामा मतदान गरेकी हुन् । विकका आफन्तले उनलाई स्टेचरमा बोकेर मतदान स्थलसम्म ल्याएका थिए ।
सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिएर केन्द्रमा आइपुग्ने वित्तिकै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मतदान अधिकृत कमल प्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ऐरावती–२ बरौलामा एकजना स्वतन्त्रसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ । प्यूठानका दुई स्थानीयतहको तीनवटा वडामा मतदान भएको छ ।
प्यूठान नगरपालिका वडा नम्वर २ दाखाक्वाडी, ऐरावती गाउँपालिका–१ दाङवाङ र २ बरौलामा वडा अध्यक्षका पदका लागि मतदान भएको हो । १२ मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।